Voreilig Schlüsse ziehen - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
लेख > दिन-द्वारा-दिन > प्रायः निष्कर्ष निकाल्नुहोस्
बच्चाहरूको चर्च सेवामा सही र गलतको बारेमा सिकाइएको थियो। सुपरवाइजरले सोधे: "यदि मैले उसको जेकेटको जेबबाट सबै पैसा भएको मान्छेको वालेट लिएँ भने म के हुँ?" सानो टमले आफ्नो हात उठाउँदै शरारती मुस्कुरायो र धमिलो पार्दै भन्यो: "त्यसो भए तिमी उसकी पत्नी हौ!"
के तपाईं, म जस्तै, "चोर" प्रतिक्रिया को लागी आशा गर्नुभयो? कहिलेकाँही निर्णय लिनु अघि हामीलाई थोरै जानकारी चाहिन्छ। हितोपदेश १ 18:१:13 चेतावनी दिन्छ: "जसले सुन्नु अघि जवाफ दिन उसले आफ्नो मूर्खता देखाउँछ र आफूलाई मूर्ख बनाउँछ।"
हामी सचेत हुनुपर्दछ कि हामी सबै तथ्यहरू जान्दछौं र ती सही हुनुपर्दछ। मत्ती १ 18, १ men मा उल्लेख छ कि दुई वा तीन साक्षीले कुनै कुराको पुष्टि गर्न सक्छन, त्यसैले दुबै पक्षले बोल्नु पर्छ।
यद्यपि हामीले सबै तथ्यहरू भेला गरेका छौं, हामीले यसलाई कुनै श doubt्का भन्दा बेसी मान्नु हुँदैन।
हामी १ शमूएल १ 1: remember लाई याद गरौं: "एक व्यक्तिले आँखाको अगाडि के देख्छ, तर प्रभुले हृदय हेरीर हेर्नुहुन्छ।" हामीले मत्ती:: २ लाई पनि सोच्नु पर्छ: "... तपाईं कुन न्यायको साथ न्याय गर्नुहुन्छ, तपाईं न्याय गर्नुहोस् ... "
तथ्यले पनि गलत निष्कर्ष निम्त्याउन सक्छ। परिस्थितिहरू हामी सँधै सुरुमै अनुमान गर्दैनौं, जस्तो कि सानो कथाले सुरुमा देखाउँदछ। यदि हामी निष्कर्षमा उडीयौं भने हामी सजिलै अप्ठ्यारोमा पर्दछौं र अरूलाई अन्याय र हानि पुर्‍याउन सक्छ।
प्रार्थना: हामीलाई निष्कर्षमा नजोल्न सहयोग गर्नुहोस्, स्वर्गीय पिता, तर धार्मिक र सही निर्णयहरू गर्न, कृपा देखाउन र कुनै श beyond्काभन्दा माथि नहुनुहोस्, आमेन।
न्यान्सी सिलसक्स, इ England्ग्ल्यान्ड द्वारा